Ixesha kunye nabahlobo 40
Akukho silwanyana sinokuphila ngaphandle kokutya. Isidingo kunye nemisebenzi yezinto eziphilayo ichaza uhlobo lokutya olufunekayo. Izilwanyana ezifuyileyo aziphili ngaphandle kokutya kwaye zihlala zingenawo umoya, nangona kunganyanzelekanga ukuba zithathe ukutya kwizitho zazo zokugaya ukutya ukuze ziphilile ngexesha lokuxakeka kwazo. Izilwanyana ezifuyileyo ezinemiphunga zihlala ziphefumla, kodwa ukuphefumla kwazo akukho ngaphezulu nje kokugcina imizimba yazo inxibelelana nobomi bayo obusezantsi kakhulu kangangokuba izilwanyana zibonakala ngathi aziphefumli kwaphela.
Iindidi zezilwanyana kunye nemikhwa yazo zilungiswe ngokwemithetho yoqoqosho ethile yendalo ukuze kugcinwe izidalwa zendalo. Ukutya kuyimfuneko ukuze kulondolozwe lonke uhlobo lomzimba, kwaye impucuko yendoda yenze ukuba kunyanzeleke ukuba kuye kuthiwe amaxesha ethutyana apho ukutya kuthathwa khona kube kufanelekile. Umntu oqhele ukutya kwakhe okanye izidlo ezithathu ngosuku akaqondi okanye axabise ukuba kwenzeka njani ukuba izilwanyana zingahamba iintsuku okanye iiveki ngaphandle kokutya, nokuba ezinye zingaphila ebusika zingatyanga. Izilwanyana kwimeko yazo yasendle zifuna ukutya ngokulinganayo kunabantu. Ukutya okutyiwa zizilwanyana zendalo ukubonelela ngeemfuno zabo kwaye ke kufuneka ukutya okutyiwayo ngabantu kubonelele iimfuno zakhe zomzimba.
Kodwa ukutya komntu kufuneka kwakhona kubonelele ngamandla afunekayo ukuze umsebenzi wengqondo yakhe ufune. Ngokukaqoqosho lwendalo atya ngayo umntu uya kwandisa indawo yakhe yokugcina amandla kwaye ongeze kumandla akhe. Ngokwesiqhelo uchitha amandla akhe kwizinto ezigqithisileyo zolonwabo. Yintoni etyiwayo engaphezulu koko kutya kutyiwa sisilwanyana ukuhambisa iimfuno zangoku zigcinwe emzimbeni wayo njengamandla angaphezulu okusaseleyo, kwaye oko kutsala xa ukubonelelwa kokutya kunganeli kwiimfuno zaso.
Njengoko ubusika busondela, izilwanyana ezifihla ukunyuka kwamafutha zikulungele ukuqala kwazo ubusika. Ukubanda kunqumamisa ukufumaneka kwabo kokutya, kukhulule umhlaba kwaye ubakhukulise emingxunyeni yabo. Emva koko bayabhabha okanye bazisongele ngokwabo kwindawo yokulondoloza ubushushu babo kunye nokukhusela kubanda. Ukuphefumla kuthoba isantya, inani kunye nobude bokuphefumla kulawulwa kwinani lamafutha afunekayo ukugcina idangatye lobomi. Ukutya okusetyenzisiweyo asikokwangoku kwimisebenzi yemisipha, kodwa ukubonelela amandla enzala eyimfuneko ukuze ugcine ucocekile, ngexesha labo elide lokulala kunye nokulala. Oku kutya okanye ipetroli yintsalela yamandla ebeyigcinele emzimbeni wayo ngohlobo lwamafutha kwaye eyotshiweyo ngexesha lokuzonwabisa kwayo ngokweemfuno zomzimba.
Njengoko umhlaba uthambekele elangeni, imitha yelanga, endaweni yokukhanya kumhlaba njengasebusika, ngoku ubetha ngqo emhlabeni, yongeza imijikelezo yemagnethi kwaye uqalise ukuncipha kunye nokuhamba kobomi emithini. Impembelelo yelanga iphinda ivuse izilwanyana ezifihlayo kubuthongo bazo, nganye ngokwesimo sayo, kwaye njengoko ukubonelelwa kwayo kulungiselelwe lilanga.
Ukujikeleza kwegazi kwenza ukuba ukuphefumla kube yimfuneko ngenxa yeoksijini efunwa ligazi nelifumana kuyo imiphunga. Ukonyuka kokuphefumla kubangela ukujikeleza okwandayo. Ukujikeleza kuyasebenza njengoko ukuphefumla kukhawuleza kwaye kunzulu. Ukusebenza komzimba kwenza ukuba igazi lisebenze kwaye nokujikeleza okusebenzayo kwenyusa inani lokuphefumla, lonke eli lisebenzisa amandla anikezelwa kukutya. Ukungasebenzi kwesilwanyana kunciphisa ukuhamba kwawo. Kwisilwanyana esikuyo yonke into ejikelezayo ijikeleza isezantsi kwaye ukuphefumla kwayo akunakufane kwenzeke. Kodwa kukho izilwanyana ekujikeleza kuzo kunye nokuphefumla okuyekile apho imisebenzi yamalungu iyemiswa khona.
Ezinye izilwanyana ezinemiphunga ziphila ngaphandle kokuphefumla. Ezo zilwanyana zihlala ziphila ngokumisa imisebenzi yamalungu ezifuna ukubakho kokutya nangokuhlala zinxibelelana nomgaqo ophuculayo ngaphakathi nomgaqo wobomi wendalo, ulwandle olungabonakaliyo nolungabonakaliyo lobomi, ngokusebenzisa umthetho-nkqubo wokulungelelanisa wokwenziwa komgaqo wayo umzimba. Kunqabile ukuba kungaze kuphele unyaka ukuba amaphephandaba awaniki ezinye iinyani ezinxulumene nokufunyanwa kwesilwanyana esihlala ixesha elide ngaphandle kokuphefumla. Rhoqo umbhali weli nqaku ngumntu okhe weva okokuqala ngento efana naleyo ayibhalayo, kwaye unokuthi ayisichaze njengesihlandlo sokuqala uhlobo lwaso irekhodi. Ngokwenyani, kukho iimeko ezininzi eziqinisekisiweyo ezirekhodiweyo, kwiijenali eziphambili zenzululwazi. Akukho nyanga zininzi zidlulileyo enye yamaphepha kusasa inike ingxelo yokufunyanwa okumangalisayo. Iqela labahloli belikhangela uhlobo oluthile lomdla kwisayensi. Babenethuba lokusika eliweni. Kokunye ukusikwa kwabo iliwa eliqinileyo lavulwa laza lacacisa isangqa ebelingene kuloo mandla luqinileyo. Kwangoko itowudi yaba yeyona nto iphambili inomdla kuyo. Ngelixa wayijonga njengoko yayincamathele kwigumbi layo elincinci elinamatye apho ibibethelelwe khona kangangeenkulungwane, omnye weqela walirhola ukubona ukuba lithathiwe, kwaye isithonga sabothusa bonke ngokuphuma engcwabeni lakhe. Ilungu elixele ukufunyanwa kwalo lathi livile kwaye lafunda ngamatyala anje, kodwa belisoloko lithandabuza ukubakhona kwalo de ibe iyibonile le nto. Ngexesha lokunika ingxelo le toad yayiphilile kwaye iphilile. Ngesinye isihlandlo kunikwe ingxelo ngabantu abadumileyo abathi ngelixa besika ilitye elithile ecaleni komjelo wamanzi wakudala, njengoko iliwa lahlula ikreyizari laliqengqeleka, kwaye labanjwa xa liqala ukukhubekisa ngokuduka.
Izilwanyana ezifunyanwa ziphila zikhawulezisiwe phakathi kwamatye, okanye zifakwe kwilitye eliqinileyo, okanye ezikhulele emithini, okanye zingcwatyelwe emhlabeni, zizilwanyana ezifihlayo, kodwa ezinokumisa yonke imisebenzi yomhlaba ngokunqamla kunikezo lomoya. kwaye kwangaxeshanye unqumle uqhagamshelo lwezinto ezibonakalayo kunye namaziko athile e-nerve kwaye uwafake kwi-etheric yokunxibelelana. Oku kwenziwa ngokujikeleza ulwimi libuyele emqaleni kunye nokuzalisa indawana yomoya ngolwimi. Ulwimi olujikeleze umva lucinezela luselenzeleni luye luye luvingcele umoya okanye i-trachea ekugcineni kwayo. Ulwimi ke lusebenza iinjongo ezimbini. Iplagi yempepho yomoya, kwaye ke ithintela ukuhamba komoya ungene emiphungeni, kwaye, kanjalo, ibekwe, yenza ibhetri apho ubomi bokungena bungena emzimbeni okoko isekethe igcinwe ivaliwe. Xa umoya uvalekile emiphungeni, igazi alinakutshutshiswa; i-oxygenation yegazi iyaphela; Ngaphandle kokunikezelwa kwegazi izitho azinakwenza imisebenzi yazo. Ngokwesiqhelo phantsi kwezi meko ukufa kulandela, kuba amandla omphefumlo aphukile, ngelixa ukuphefumla kufuneka kugcinwe kushushu koomatshini bokusebenza ukuze baqhubeke nokusebenza. Kodwa ukuba xa ubonelelo lomoya lunqunyulwe kwimiphunga unxibelelwano olufihlakele ngakumbi kunomoya wokuphefumla lwenziwe phakathi komzimba wenyama kunye nolwandle lobomi, umzimba wenyama unokugcinwa uphila logama nje ukudityaniswa kobomi kwenziwa kwaye umzimba uhlala cwaka.
Logama nje ulwimi lugcinwe kwindawo echazwe, isilwanyana siya kuphila; kodwa ayinakushukuma, kuba ukuphefumla umoya kuyimfuneko kwimisebenzi yomzimba, kwaye ayinakuphefumla ngelixa ulwimi lwayo luvimba umda womoya. Xa ulwimi lususiwe ukunxibelelana nokuhamba kobomi okufihlakeleyo kuphukile, kodwa ubomi bokwenyani buqala ngokubetha komphefumlo.
Ngaphandle kwento yokuba iidyokhwe kunye namaxhwili zifunyenwe ziphilile kwilitye eliqinileyo, kuqikelelwa ukuba zininzi kangakanani, apho ziye zafikelela khona. Malunga nendlela i-toad okanye i-lizard ibinokubanjiswa ngayo kwilitye, oku kulandelayo kunokubonisa iindlela ezimbini ezinokubakho.
Xa isidalwa sifunyenwe kwilitye lamanzi elenziwe ngamanzi yibhanki yomlambo, kunokwenzeka ukuba, ngexesha lokungasebenzi komzimba, amanzi asuka awugqume kwaye bekukho idipozithi ephuma kumanzi ahlala ejikeleze umzimba wesidalwa kwaye wasifaka entolongweni. Xa isilwanyana sifunyanwa kwilitye lemvelaphi ye-igneous, kunokwenzeka ukuba ngelixa ikwimeko yayo yokwenene, yema ngendlela kwaye yagqunywe ngaphezulu ngumjelo opholileyo welitye elinyibilikileyo eliphuma kwintaba-mlilo. Izinto ezinokuphikiswa zingenziwa ukuba akukho buthi okanye buzi buhlala emanzini kangangexesha elide kwaye babenokufumana ubunzima bokubeka kwilitye elininzi malunga nayo, bengakwazi nokuma nobushushu kunye nobunzima belitye elinyibilikisiweyo. Ezi ziphikiso ziya kuphulukana nokubaluleka kwazo kumntu oqwalasele umkhwa weebhulukhwe kunye neebhulukhwe, xa ekhumbula ubushushu obugqithisileyo ekubonakala ukuba bayabuvuyela, kwaye xa kuqondwa ukuba ngeli xesha kugungxulw 'umzimba nokunxibelelana nezinto ezikhoyo ngoku. Ubomi, azidibani neemeko zomzimba kunye neemvakalelo.
Ngokwenzululwazi yale mihla akukho mthetho unjalo, kuba akukho mthetho waziwa kwisayensi yale mihla. Ukuba umntu angaphila ixesha elide ngaphandle kokutya nomoya awuvunywa yisayensi esemthethweni. Akunakubakho, ngokwenzululwazi, kuwo nawuphi na umthetho ovumela umntu ukuba aphile ngaphandle kokutya nomoya, bonke ubungqina ngaphandle koko, ide inzululwazi iwuqulunqe umthetho kwaye iwamkele ngokusemthethweni. Nangona kunjalo, abantu baphila ixesha elide, ngaphandle kokutya kwaye banqunywe emoyeni, ngamangqina athembekileyo, kwaye njengoko kubhalwe kwiirekhodi zikarhulumente. E-India kukho iirekhodi ezininzi kumaxesha anamhlanje, kunye nee-akhawunti kunye namabali abuyela emva kwiinkulungwane ezininzi, yeyogis ngenxa yeenkqubo ezithile bekwazi ukwenza imisebenzi yomzimba kwaye beme ngaphandle komoya ixesha elide. Phantse nawuphi na umHindu ukhe weva okanye wabona ubungqina obunjalo. Enye yezi ngxelo iya kusibonisa.
Ukwenzela ukubonisa ubungqina bokuba umntu unokufumana amandla angaqhelekanga ngokuqhelekileyo kuthathwa njengokungenakwenzeka, i-yogi yomHindu ethile yanikezela ukubonisa kumagosa angamaNgesi ukuba angaphila ixesha elide ngaphandle kokutya okanye umoya. AmaNgesi aphakamisa iimeko zovavanyo, ezazamkelwa, kuqondwa ukuba akukho wumbi ngaphandle kweyekiyo, abafundi, bamlungiselela ubunzima aze amkhathalele emva. Ngexesha elalimiselwe indibano enkulu yabantu ababehlanganisene ukuza kunika ubungqina malunga nommangaliso oza kwenziwa. Engqongwe ngabaphulaphuli bakhe abaninzi, i yogi yahlala phantsi ecamngca de abafundi bakhe abebekhona bayabona ukuba kukho utshintsho. Bambeka ke kwibhokisi leyo eyayigutyungelwe, yaze yafakwa ecaleni kwebhokisi yokukhokelela. Isigqubuthelo sebhokisi safakwa kwaye sitywiniwe ngobuchule saza sathotywa ngaphezulu kweenyawo zantandathu emhlabeni. Umhlaba ke waphoswa kwi-casket, kwaye imbewu yengca yatyalwa ngaphezulu kwayo. Amajoni agcina rhoqo ukugada kuloo ndawo, eyindawo yokutsala abakhenkethi. Iinyanga zidlulile, ingca yakhula yaba sod esindayo. Ngexesha ekuvunyelwene ngalo kuwo onke amaqela abandakanyekayo ayekhona, kwaye ababukeli babemkhulu, njengoko iindaba ezimangalisayo zazisasazekile. Ingca yahlolwa ngononophelo kunye nolwaneliseko. Isod yasikwa kwaye yasuswa, umhlaba uvulekile, i-leaden casket iphakanyisiwe, amatywina aqhekekile kunye nesigqubuthelo sisuswe, kwaye uYogi wabonwa elele njengoko wayebekwe. Wasuswa ngentlonelo. Abafundi bakhe bayihlikihla imilenze, bamphatha ngamehlo kunye netempile, bakhupha ihlamba lakhe. Kungekudala emva kokuphefumla kwaqala, ukubetha kwempundu, isandi esikhutshwe emqaleni kaJogi, amehlo akhe aqengqeleka kwaye wavula wahlala phezulu wathetha. Umahluko okwahlukileyo kuYogi kukuba wabonakala ethe kratya ngakumbi ngexesha lokulamla nokungcwatywa. Eli tyala libhalwe kwenye yeengxelo zikarhulumente.
Abo bathi baqhelene neendlela ezifanelekileyo zokungena kwimeko zonxunguphalo, bathi I-Yogis ilungiselela imithambo ethile yokuphefumla kunye nonyango oluthile lolwimi nomqala. Kuthethwa ngabo kwaye kukwathethwa ezincwadini ezijongana nomxholo we "Yoga," ukuba ngokucamngca kunye nokuzivocavoca ngokuphefumla, ukuphefumla kunye nokugcinwa komphefumlo, ukusebenza kwamalungu omzimba kunganqunyulwa kwaye umzimba ugcinwe uphilile . Kuthiwa iyimfuneko ukuze umntu azokuthatha into ende angakwaziyo ukuhambisa ulwimi alubuyisele emqaleni wakhe. Ukwenza oku kwenzeke ngokwasemzimbeni, kuthiwa unxibelelwano phakathi komhlathi ongezantsi kunye nolwimi kufuneka unqunywe okanye ugqunywe. Ke i-Yogi kufanelekile ukuba idonsa-okanye oko kubizwa ngokuba "lubisi" -ulwimi lwayo ukuze iluleke ubude obuyimfuneko ekusebenzeni. Utitshala wakhe uyambonisa ukuba wenza njani.
Nokuba olohlobo lweYogis lufundile ukuxelisa izilwanyana ezingaqhelekanga kunye nokulinganisa iimeko zemvelo zezilwanyana ezithile, nangona kunjalo iimeko kunye neenkqubo ziyafana, nangona loo nto uYogi asilela kuyo indalo ayifumanayo ngokwenza, okanye ngeendlela zokwenza izinto. Ulwimi lwe-toad okanye lwe-lizard alufuni ukusebenza ukuze lunike ubude, kwaye ezi zilwanyana azifuni mithambo yokuphefumla ukuze zibaxhumanise nokuhamba kobomi ngaphakathi. Ixesha kunye nendawo ziya kugqiba ukuba ziya kungeniswa nini. Into enokwenziwa sisilwanyana ngendalo, umntu unokufunda ukuyenza. Umahluko kukuba umntu kufuneka abonelele ngengqondo, oko akushiyeleyo yindalo.
Ukuze umntu aqhubeke ephila ngaphandle kokuphefumla kufuneka enze unxibelelwano kunye nemiphefumlo yakhe yengqondo. Xa ukuphefumla kwakhe kuphumla, uyaphola. Umphefumlo ophefumla ngamanye amaxesha ubangelwa kukungazi ngabom ngesimo sengqondo okanye ukuphazamiseka, okanye unokubangelwa yimagnethi okanye ingqondo yomnye, njengakwimagnethi enzulu okanye ubugqwirha. Xa indoda, ngokuzithandela kwayo, idlula ikwimeko apho ihlala khona ngaphandle kokuphefumla ikwenza oko ngokwenza umthambo wokomzimba kunye nokuphefumla njengoko kuchaziwe okanye, ngaphandle kokuphefumla kwendalo, ngaphandle kwentshukumo yomzimba nantoni na. Kwimeko yokuqala unxibelelana nomoya wakhe wengqondo ovela emzimbeni wakhe ongezantsi. Kwimeko yesibini unxibelelanisa ukuphefumla kwakhe emzimbeni wakhe nasengqondweni yakhe ngaphezulu. Indlela yokuqala isebenzisa iziva, yesibini isebenzisa ingqondo. Indlela yokuqala idinga ukuphuculwa kweemvakalelo zangaphakathi, indlela yesibini iphunyezwa xa umntu efunda ukusebenzisa ingqondo yakhe ngobuchule, ngokuzimeleyo kwiimvakalelo zakhe.
Amabakala amaninzi emicimbi kunye nangaphezulu komzimba omnye angena kulwakhiwo lomntu. Nganye yomzimba wayo okanye inqanaba lomcimbi ikhutshwa lihlabathi liphuma kulo. Kodwa olona boncedo luphambili ngomzimba omnye oguqula ubomi baye kwamanye. Xa isibonelelo sobomi sithathwa ngokomzimba siyasetyenziswa kwaye sidluliselwe kwi-psychic. Xa esona sibonelelo siphambili siza ngokusebenzisa i-psychic sidlulisela kwaye iqhubeke iphilile ngokwasemzimbeni. Umthetho ngowokuba umntu unokugcina umzimba wakhe uphila ngokuphefumla akwazi ukuwanika.